Mareykanka oo taageeray Jadwalka ay ka hor-yimaaden Galmudug iyo Koofur Galbeed – XAMAR POST
Mareykanka oo taageeray Jadwalka ay ka hor-yimaaden Galmudug iyo Koofur Galbeed
By Mohamed Abdi On Mar 17, 2022
Qoraal kooban oo lagu daabacay Bogga Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu taageeray Jadwalka ay soo saareen Guddiga Doorashada Heer Federaal ee FIET, kaasi oo lagu shaaciyay xilliga dhammeystirka iyo dhaarinta Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya.
”Waxaan rajaynaynaa in aan la kulanno Xildhibaannada cusub ee Soomaaliya kaddib markii la dhaariyo 14-ka Abriil, weliba xilli ku habboon” ayaa lagu yiri Qoraalka oo lagu daabacay Bogga ay Safaaradda safaaradda ku leedahay Aaladda Twitter-ka.
Hadalka ka soo baxay Safaaradda ayaa ku soo aadaya xilli labada maamul ee Galmudug iyo Koofur Galbeed ay ka soo horjeedsadeen Jadwalka ay soo saareen Guddiga Doorashada Heer Federaal ee FIET, iyaga oo sheegay in uusan aheyn mid ay kawada tashadeen Golaha Wadashiga Qaran oo hoggaaminaya Habaraaca Doorashada.
Arrintan ayaana muujineysa khilaaf hor leh oo soo kala dhex galay Golaha Wadashiga Qaran oo ay ku mideysan yihiin Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Ruushka oo loogu baaqay joojinta dagaalka uu ka wado Ukriane
Mas’uuliyiinta Soomaalida ee xayiraada lagu soo rogay oo la kordhiyey